Tony Parker anopemberera makore ake e37 nhasi: Kudzokera pane zvaakabudirira zvikuru - TELES RELAY
HOME » kambani Tony Parker Anopemberera Makore Ake 37 Nhasi: Kutarisa Pamusoro peZvibudirira Zvake Zvikurusa
Tony Parker anopemberera makore ake e37 nhasi: Kudzokera pane zvaakabudirira zvikuru
William Anthony Parker II (kubva zita rake mubhuku rehurumende) nhasi anopemberera makore ake e37. Somunhu mutero kuna hofori iyi basketball, takasarudza kutanga Mini-kudzokorora basa womunhu akanga zvokusarudzwa mukuru French Basketball mutambi ose nguva uye mitambo French soro vanobhadharwa munyika makore akawanda mumutsara.
Heano zvimwe zvekukunda kwake kukuru ...
1. Mukurumbira muduku muduku mutambi weSan Antonio Spurs
Paaingova 19 makore 2001 muna Tony Parker akatanga ake nounyanzvi basa pamwe San Antonio Spurs muna NBA uye akava gotwe mutambi munhoroondo kukirabhu ichi .A kunoshamisa feat.
Verenga zvakare: Unicef ​​Côte d'Ivoire yakakunda zvikwereti zviviri paZ2019 Inspire Awards
2. Mutambi wekutanga weFrench kupinda mu "All Star Game"
Yakanga iri kurota kuti ave nechepamusoro pe "All star game" iyo iyo isina kumbobvira yakanyora kuvapo kweFrench. Muna 2006, mutambi webhasi anobudirira mune iyi feat.
Yeuka kuti "All Star Game" kana kuti NBA All-Star Game ibasa rebhasika gore negore pakati pevatambi vakanakisisa veNBA East neWest Conferences.
3. Tsamba yeyo yakanakisa smuggler munhoroondo yeSan Antonio
Ichi chinyorwa chinopiwa kumudiki wechidiki mushure mokunge aputsa zvinyorwa zvepfuura zvakagadzirwa nemutungamiri (1999) weboka, Avery Johnson.
Verenga zvakare: Mercato: Yaya Toure anoparadza Nigeria uye anoenda kuchitongwa muChina
Nekugovera 9 kubatsira kune OKC inoFebruary 4 2012, Tony Parker ave achizova mutungamiri wepamusoro munhoroondo yeSan Antonio.
4. Top scorer title, best player, first French nBA champion
Pangopera makore 21, 15 Mai 2013 murume ane talenta yakachena anova mutambo wekutanga weFrance weNBA neSan Antonio Spurs. The Spurs yakarova Nets yeNew Jersey mukupedzisira ne4 inowanikwa pa2.
Uyezve, Tony Parker chinovapo ushasha iyi musoro "Best Player" uye "Top Scorer" pamwe 19 pfungwa paavhareji, uye 2ème gotwe mutambi akabata kumarudzi ose.
5. 7th mutambi munhoroondo kuti akakunda mitambo yakawanda mubasa rake.
Muna March 2018 pakachengeteka ichimirira mumwe mutambo pamusoro Spurs muNew Orleans sowakajeka vakakunda wokutanga kutaurwa (mu 98 93), kuti ngano French anova mutambi wechinomwe Basketball nhoroondo kuhwina zvikuru mitambo wayo basa.
Verenga zvakare: 1er international chess mutambiko muAbidjan: kubudirira kuburikidza nekutsigirwa kwaSOLIBRA
6. Rakanyorwa 8th Most Winning Player muNBA History
Muna December 2017, nyeredzi yeSan Antonio inogadziriswa ichi nekusimudzira kukunda kweboka rake pane Clippers.
Rwendo rwekubudirira kwake munguva yakareba kwenguva refu, saka chikamu chemu guru uyu chinoramba chiri muenzaniso uye chinenge chakakwana.
Isu tinoona kuti 17 Mai izuva rakaratidzwa kuberekwa kwemajeni, semukomana uyu.
VERENGA ZVAKAWANDA HERE
Ebolowa: zvigaro zvepaguru zvakachinjwa kuva mazariro
Usati watana mumwe munhu kutenga kana kutengesa zvinhu mumatengesi ekutengesa, verenga izvi: